10-kii 9 ayaa shaqo la’aan ah dumarka Soomaalida | Somaliska
10-kii 9 ayaa shaqo la’aan ah dumarka Soomaalida
Sidaa waxaa lagu soo bandhigay baaritaan laga sameeyay gobolka Södermanland. Warbixinta oo ay samaysay Laanta afti ururinta (Statistiska centralbyrån) ayaa muujinaysa in dumarka Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi oo ay madaxda u tahay magaalada Eskilstuna ay shaqo la’aan aad u badan haysato. 10 kii dumar ah ayaa 9 ka mid ah ay shaqo la’aan yihiin.
Sababta ay dumarka Soomaalida aadka ugu liitaan suuqa shaqada ayaa lagu macneeyay heerkooda waxbarashada oo aad u hooseeya. Per Brinkemo oo ah nin wax ka qora arimaha Soomaalida ayaa idaacada SR u sheegay in dumarka Soomaalidu ay ka yimaadeen wadan burburay isla markaana ay xitaa marka Somalia la joogo ay heerkooda waxbarashada ka hooseyso ragga.
Guud ahaan Soomaalida ku nool Sweden ayaa shaqo la’aan haysataa balse xaalada dumarka ayaa ah mid aad u liidata. Hadaba su’aashu waxay tahay ma heerka waxbarahada ayaa dhibaatada ah? Ma suuqa shaqada ayaa cunsuriyad ku haaya Soomaalida? Mise waxaa la dhihi karaa dumarka Soomaalidu waxay shaqadii ka doorteen guri jooga iyo caruur korinta?
Hawsha Arbetsförmedlingen oo lagu tilmaamay mid aan macquul ahayn
jaajus aya tahay diintena fari iney hablaha caruurtooda korsadaan ragana u soo shaqeeyaan ee dhibka dhaaf
Haddii ay raggii gabeen in ay reerka u shaqeeyaan oo ay haweenkii ku haystaan lacagta caryta? maxaad ka leedahay arintaas?
Asc dhamaan asxaabta dhibka jira waa in suuqa shaqada dumarka soomaaliyeed lagayara jeclayn maxaayeelay waa xijaabanyihiin gaaladaan majecla xijaabka dumarkayna qeyr allaha siiyee waa dumarka kaliya ee ka imaada wadamada islaamka oo xijaabka dhegan
shaqo dhib malahan xijaabka hakatagini
hanoolaadaan dumarka soomaaliyeed
May 19, 2015 at 02:44
Acw sal dhig waxaa u ah kahadlka dumarka Somaliyeed 2 arimood (1) bakhiilnimada gaalada oo kamaseyrsan gabdhaha caruurtooda korsanaya raggina usoo sha qeybta yaan iyo (2) ragga qaarkiis iyagoo shaqeeya misna saambo kudhala caruur badan tasoo xisab ahaan noqonesaa famil lacaawiyo oo shaqa la, aan ah magaceena waxaa ku ciyaarana waxaa ugu badan doqomankan caruurta xaraanta ku dhalay.